Factory Tour - Guangzhou Aiweidy Izibane Acoustics Co., Ltd
G uangzhong Aiweidy Izibane Acoustics Equipment Co, Ltd, i uphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo kwezibane professional kunye nesandi kwibala kwamashishini abaxhakaxhaka Company ibekwe Baiyun District of Guangzhou City, nesigubungelo 15 Acra, ukwakha indawo ka 25000 m ^. Izityalo Garden, umthombo zokuhomba ngaphakathi echibini. 700 m ^ 2 mveliso kunye ezikrelekrele studio nemiba ngemiba yezemfundo, ngaphezu kwama 1,000 square metres indawo ofisi zale mihla.
C ompany Unezixhobo kuphela imveliso phambili, kodwa kukho inani ezikumgangatho ophezulu, iteknoloji ophezulu, iinjineli zobungcali kunye nokuphuculwa kwabasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobugcisa, kukho inani elikhulu sabakhutheleyo, ubumbano abasebenzi kakhulu.
A iimveliso iweidy sinandipha waziwa kakuhle kwimarike yamazwe ngamazwe, ingakumbi izibane intloko ihambe, izibane zethu LED kunye nezibane nangaphandle. Ngoku, iimveliso zethu lithunyelwa eYurophu, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, North nakuMzantsi Melika kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Xa phambili, bonke oogxa ka Aiweidy ndikuncedile intsingiselo yawo ekumgangatho kuqala, inkonzo kuqala, izinto ezintsha kuqala kunye nokuthembeka kuqala njengesiqhelo ukuze bakhonze abathengi kunye nabahlobo ukusuka apha ekhaya nakumazwe aphesheya.